11 Kwangathi 2017
Isidingo se-Awa "Embonini Yezokuxhumana" - CISCO
Imbonini ye-IT ibe ukuma phakathi kwezinhlobo eziningi emva kwembonini ngenxa yezinhle zayo kuze kube sekubizweni, izinkokhelo, ukubheka kanye nokuphikiswa okukhona. Isidingo sezimo zokuhlala, ukuthuthukisa nokuthuthukiswa kwebhizinisi le-IT senze umqondo wokuthi "Ukuxhumana" nokuthuthukiswa okusheshayo, futhi ukuqhubeka "ku-Networking" kuye kwaveza "ochwepheshe" kule nkambu. Ngesithakazelo esikhulu salezi zinkampani futhi sithuthukisa ukufinyeleleka kwabo okulula nokukhuphuka, intshisekelo yokuba "AbaPhezulu Abalungisiwe" baye bahlakulela. Namuhla, ngisho nokufinyeleleka kwe-"Professional Professionals" akuyona yonke into enzima, futhi isidingo sokubaluleka okukhulu sishintshile ku "Abaqeqeshi Abaqinisekisile" abaqinisekisiwe kwezinye izingxenyekazi zekhompyutha, izinqubo, nokusebenza. Ukuvuma kwalaba "Abakwa-Affirmed Professionals" kungenxa yendlela abayilungisile ngayo noma abaqinisekisile ekunqumeni, ama-commonsense nezinhlelo zamuva zokuxhumana ezihlobene nemakethe. Ukuhlonishwa ngokujulile kwalaba "Abasebenzi Abaqinisekisiwe" yibo abaqinisekiswa ku-"CISCO" .. !!
Kungani isitifiketi se-CISCO sihle kakhulu "Sokuhlonipha"?
CCNA Certification noma CCNA Training
I-CISCO iyinkosi ye-"Networking Industry" futhi uma kungenzeka ukuthi uqinisekisiwe noma unikezwe ngumbusi ngokucacile uphenduka "Amadoda eNkosi". Zonke izinto ezicatshangwayo, lokhu kungesizathu esisodwa kodwa iqiniso ukuthi ochwepheshe abaqinisekisiwe be-CISCO banokuqonda okuphakeme kakhulu kunethiwekhi ye-intanethi, izinto, amanethiwekhi ahlukene ahlangene ndawonye endaweni futhi ngendlela, iningi lezinto ezihlanganisa imboni, isimiso samanje sezinto eziphilayo emhlabeni wonke, sisuka ku-CISCO. Namuhla i-CISCO iyiphayona elimangalisayo, elingenakuphikiswa, eliphelele ebhizinisini lokuxhumana. Inikeza izimpendulo ngamaklayenti egajethi ahlanganisiwe kumanethiwekhi ahlukahlukene ukuze ahlangane ngokungenakuqhathaniswa, enza ukufinyeleleka kanye nokushintshaniswa kwedatha phakathi kwabantu abalula, kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izinhlobo ngesikhathi, indawo nezigaba. I-CISCO idlulisela izinqumo zokuxhumana ezinqunyelwe ukuphela kokugcina, okwenza isakhiwo esivamile sinikeze ukulawulwa kwenethiwekhi okungabonakali. Ibuye inikeze nezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zezinto zokusebenza ukuze kuqinisekiswe i-Cisco Internetwork Operating System Software. Yingaleso sizathu ukuqhubela phambili kanye nokuhlangana kubandakanya isithakazelo sochwepheshe oqinisekiswa yi-CISCO okusho ukuthi "i-CCNA Certification". Ukuqeqeshwa kwe-"Cisco Certified Network Associate" kuyimpendulo yanamuhla yokunikeza ukuqhutshwa kwesimiso sakho sokuxhumana.
Kuyathakazelisa kakhulu ukuphenya ukuthi kanjani futhi nini i-CISCO yaba namandla amakhulu kangaka ebhizinisini lokuxhumana. Ibuyela emuva ku-1980 lapho uLen Bosack noSandy Bosack, bobabili basebenza emahhovisi e-PC e-Stanford University benza isiphakeli lapho ama-PC abo angakhulumisana khona esebenzisa umhlangano we-IP. Ku-1984 basungula "izinhlelo ze-cisco" futhi kamuva ku-1992 igama laguqulwa libe yi "CISCO Systems, Inc.". Ngaleso sikhathi benza ambalwa "Amaseva E-Portal" okwamanje okubizwa ngokuthi "i-Old Alphabet Soup Products" njenge - AGS; I-MGS; I-CGS; I-IGS ne-AGS +. Ngaphakathi konyaka i-CISCO idlulisele ukushintshwa kwe-4000 okumangalisayo, i-7000, i-2000, ne-3000 ukushintsha kwamalungiselelo. Kungakapheli iCISCO ende yaphenduka inhlangano eyayikuthanda kakhulu futhi edingekayo ekhethekile ebhizinisini lokuxhumana. Lokhu kwaveza olunye uhlobo lokuvivinya kubo, okuyindlela yokubheka kuzo emazingeni ahlukene nasezindaweni ezihlukahlukene. Ukuba nezinsimbi eziyinkimbinkimbi namalungiselelo afuna abasebenzi abanekhono ukuletha, ukuwahlola nokuwahlola. Impendulo efanelekile yafika njengohlelo lwe-Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). Inhloso yayiyisisekelo kakhulu - inani eliningi lemishini edingekayo edingekayo ochwepheshe abanolwazi abangenza okufanayo naphezu kokuqapha nokuphenya lapho kudingeka. Lolu hlelo lwalungisa ochwepheshe abangathatha kuzo zonke lezi futhi benze njengoba kudingeka. Lolu hlelo lwaluqinisekisa abantu emazingeni ahlukene okukwazi ukusebenza okukhethekile, ukulawulwa kwezinhlelo zokuxhumana kanye nokwenza izinyathelo ngenxa yokuvulwa kwabantu bonke, okwakukade kuvinjelwe umbhangqwana. I "CCNA isitifiketi" yisinyathelo sokuqala noma ungayibiza ngokuthi "itshe lokungena" kulolu hlelo.
I-CCNA Certification yisitifiketi sokugunyazwa kunoma yimuphi umqeqeshi wezinethiwekhi odingeka ukuthi abe ngu-CISCO oqinisekisiwe. Zonke ezinye izitifiketi zithatha lesi saziso esiyisisekelo. Izinzuzo zokuba yi-CCNA Certified / Certification ziningi, ukubhala uhlu oluthile -
Izinhlangano zenza ilungiselelo lamakhono okulinganisa amakhono ochwepheshe onokubhekana nomkhumbi ngokufanele emphakathini ohlose ukuxhumana nabantu. Bangakwazi ukugcina lokho njengendlela evamile yokukhetha umncintiswano.
Abantu banikezwa ngamakhono okubeka ukuqonda, ukwethula nokubhekana nokusebenza kwe-Cisco Internetwork Operating System kanye nemishini ye-Cisco. Ngaphezu kwalokho, amantongomane nama-bolts we-Internetworking akhulunywa ngokungeziwe ngomgomo angase ahambisane nawo ezindaweni ezingezona "Okungekho Cisco".
Ukuqeqeshwa kwe-CCNA kuzokunika isiteji lapho i-CCNA Certification yakho iphenduka khona yesikhulumi sokusebenza okufezayo, nokuhlonipha.
I-CCNA Certification yakho izokusiza ukuthi usule ngaphezu kokuncintisana kochwepheshe, izinhlangano zangaphakathi nangaphandle.
Uvuleka ngokucacile ukufaneleka kwezitifiketi ezithuthukisiwe, uma u-CCNA Certified, njenge - CCNP (Cisco Certified Network Professional); CCIE (Cisco Certified Workwork Expert) CCDA (Cisco Certified Design Certification) neCCDP (Cisco Certified Design Professional).
Ucatshangwa njengenkosi yokuxhumana, unomsebenzi, futhi unengqondo ekunqumweni kokuxhumana nezinkinga ezixakile noma ukubiza izinhlelo zokuxhumana.
Ukwamukelwa okuphezulu, njengendlela yokuxhumana nenethiwekhi, i-CCNA Certification uma ihlukaniswa nanoma yikuphi esinye isitifiketi ngokufanayo kwenza kube yisisusa sesicelo. Uyakwamukela kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ukuthi awunayo iminyaka ehlukahlukene yokuhlangenwe nakho okungeziwe ku-repertoire yakho.
Kodwa kufanele wazi ngamakhono ayisisekelo okufanele uzuze ukuhlangabezana nokuqeqeshwa kwe-CCNA Certification noma i-CCNA.
Ukuhambisana nalokhu kunamakhono ayisisekelo okumele ube nakho-
Ukuqonda i-LAN eyisisekelo, ukuqondiswa kwe-WAN ne-LANE amanethiwekhi, ukusungulwa kwawo, ukusetha kanye nendlela yokusebenza ngayo.
Lungiselela noma uqalise inethiwekhi namantongomane nama-bolts we-IP, i-IPX, i-Frame Relay, i-Ethernet, ne-VLAN.
Gwema ukufinyelela okukude, ukufunda izinhlelo zokusebenza ezintsha ezifana nokuhweba kwe-inthanethi, imidiya exhumana, njalonjalo.
Kumele uthole ukuqeqeshwa kwe-CCNA kusuka esisekelo okuqapha ngokucophelela futhi kukunika amandla okuthola izidingo eziphakeme zolwazi ngokwakha isu lokuzikhethela lokukubonisa ekuthuthukiseni ukucushwa kwenethiwekhi, ukuqondisa ukuxhumeka kwenethiwekhi esimweni esilungile nesokuhlola, nokuqhubeka nokusebenza ukuxhumana. Kumele ulungele ukuthi inhlangano yomhlangano yamakhono akhethekile ineliseke. Kufanele uthole ulwazi oluphefumulelwe lwezinto ezikhethekile, amadili kanye nokuphathwa kwamakhono okudlulisela kahle amandla lapho unolwazi ngaphakathi kwesimo esifanele. Kufanele uthole ukukhokhela okude kakhulu kwi-Cisco ukuhamba nokuhamba kwezifundo zesitifiketi. Zimbalwa zezingqikithi eziyisisekelo okufanele uzi ukuthi ziyi -
Amamodeli alayishiwe nezintandokazi zakhe
I-OSI reference model kanye nezimo zayo ezinhle
Izigaba eziyisikhombisa ze-OSI
Ithuluzi lokulawula umzila wokuthutha
Ukulawula ukugeleza kanye ne-data epitome
Cisco shintsha izinto
I-Protocol Yokutshala Isihlahla
I-LAN Ishintshe ukuthuthukiswa, Shintshela izinhlobo kanye nokusebenza kwabo ngamashintshi angqimba-2
Ukuhlelwa kwe-IOS yokuphatha ukukhokha
I-IP yokuThuthukisa ubuchwepheshe kanye nenqubo
Umsebenzi we-Internet we-Cisco nokuphathwa kwawo
I-Novell IPX nomklamo wayo
Imisebenzi yezingqalasizinda, ukuphepha, nokuphathwa
Ukukubeka ngokucacile, inhloso kufanele ibe ukufunda i-venture LAN ngezinguquko ezihlukahlukene, ukuqondisa i-VLAN, ukuklama i-OSPF ne-EIGRP, ukusebenza ngamakhono enethiwekhi, izinzuzo zefu futhi uphenyo olunzima lwezinethiwekhi zokusebenza okulula kwenethiwekhi.
I-CCNA ukuqeqesha ngokusungulwa ngokungaziwa kanye nokuhlangenwe nakho yiyona into okufanele uhambe nayo bese ukhetha. Izinhlangano ezinjenge- "KOENIG Solutions" ezifundela amahhovisi okuqeqeshwa kanye nezitifiketi ezikhethekile zokufundela amathemba, izinkinga, nezichwepheshe, kuzo zonke izinhlelo zokuxhumana zenethiwekhi ezidingekayo ngokudingekile. Banezinkampani ezingaphezu kuka-300 abaqinisekisile abachwepheshe ezindaweni zabo. "I-KOENIG Solutions" ibhekwa njengamaphayona omhlaba wonke ekuxhumaniseni ukuqeqeshwa. Zithatha izindlela zokuqeqesha ezishintshile ukusuka ekilasini eqondile ekuhlangenwe nakho kwezemidlalo, ukuthumela umeluleki emgodini wakho wokubutha. Noma ubani ofuna umsebenzi ohlakaniphile ekuxhumeni, kusukela olwazini kuya kochwepheshe angathola i-CCNA Certification evela kubo.
Kungenzeka ukuthi unento ethile njengento eyengeziwe njengokwengeziwe kwamakhono akho kulo mhlaba onobudlova futhi mayelana nokuhweba imboni kuyisisekelo kakhulu sokuthi ube nokuthile okunjalo. Akuyona nje isitifiketi esisebenza kodwa kunalokho ukungezelela ukufaneleka, imfundo, ubuhlakani, idatha kanye nokuqonda okuzokwenza ukuthi uqhubeke futhi usebenze kuzo zonke izimo zokuxhumana. Uma usuCCNA Certification usuqedile uyavuma emhlabeni wonke kungakhathaliseki ukuthi ukhuluma ngani futhi uqobo lwezintambo. Wena futhi ungene emithonjeni yedatha kanye nemicabango lapho ehlakazekile ekuthwaleni okulungile ngeke nje kuphela izinhlangano zokuhlomula ekudaleni izinhlangano ezizuzisayo zizohlomula abantu abahlobene nawe sonke ngokusebenzisa inhlangano. Ukufeza i-CCNA Certification, noma kunjalo, okwedlulele kakhulu kodwa imikhiqizo yezinto eziphilayo ihamba kahle kakhulu futhi izokunika ithuba lokubheka zonke izinkinga. Kuthiwa akukho maqondana anelungelo lokufeza okwenziwe kodwa endaweni yokuxhumanisa kukhona ngokuqinisekile - yiyona i-CCNA Certification.
I-CCNA Certification Certification - I-Complete Guide
Isinyathelo ngesinyathelo Guide ukuze ube CCNP Wireless Certified Professional